Mid ka mid ah kubbad abuurayaasha ugu wanaagsan qaaradda Yurub oo baxsad u ah Liverpool – Gool FM
(Liverpool) 24 Juun 2020. Naadiga Liverpool ayaa akhbaar farxad leh heleysa kaddib markii ay ogaadeen in xiddiga khadka dhexe kubadda kaga abaabula Bayern Munich ee Thiago Alcantara uu doonayo u soo dhaqaaqisya Anfield, xilli ay hakad galeen wada hadalladii heshiis kordhinta ee uu kula jiray kooxdiisa.
Wararka ka imaanaya dalka Jarmalka ayaa sheegaya in laacibkan uu doonayo ku biirista kooxda hoggaamineysa horyaalka Premier League si uu u wajaho loollan cusub maadaama uu toddobo sano u ciyaarayay Bayern.
Kubbad sameeyaha reer Spain oo ay hal sano kaga harsantahay qandaraaskiisa Allianz Arena ayaa lagu soo warramayaa inuu hakad galiyay wada xaajoodkii uu kala jiray kooxda heysata horyaalnimada Bundesliga si uu uga fikiro mustaqbalkiisa, iyadoo ay xusid mudan tahay in dhowaan heshiisyo cusub ay saxiixeen saaxiibbadiisa Manuel Neuer iyo Alphonso Davies.
Inkastoo uu yahay 29-jir, haddana Thiago ayaa doonaya inuu soo arko waayo cusub maadaama toddobadii xilli ciyaareed ee uu ku sugnaa Bundesliga ay kaliya kooxdiisa qaadeysay.
Waxaa lagu soo warramayaa inuu xiiso badan u hayo ka ciyaarista horyaalka Ingiriiska iyo ku biirista Liverpool, waxaana uu saaxiibbadii ogeysiiyay inuu doonayo la shaqeynta Jurgen Klopp.
DHALASHO WACAN Lionel Messi... (Wax ka ogow toddobo rikoor oo gaar u ah kabtanka Barcelona iyo Argentina)